निर्यातमा हतार गर्दैनौँ, पहिले हाम्रो उत्पादनलाई देशका कुनाकुनामा पुर्‍याउँछौँ - Farak Samachar Farak Samachar
बालाजी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका निर्देशक गौरव गडियासँगको अन्तरवार्ता
नेपालका सिमेन्ट उद्योगमा नवप्रवेशी उद्योग हो बालाजी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को दोस्रो त्रैमासबाट रूपन्देहीको चन्द्रौटाबाट सो उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरको थियो । सो इन्डस्ट्रिजले अहिले ओपीसी, पीपीसी र पीएससी सिमेन्टको उत्पादन गर्दै आएको छ । बाहुबली, चन्द्रौटा, नटराज, सृष्टि ब्रान्डमा बालाजी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले दैनिक ४० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । मुख्य रूपमा पश्चिम, सुदूरपश्चिम क्षेत्र र काठमाडौँमा यो सिमेन्टले आफ्नो व्यापार केन्द्रित गर्दै आएको छ ।
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण समग्र उद्योग जस्तै सिमेन्ट उद्योग पनि ठूलो मारमा परेको छ । ६ महिना लामो लकडाउनले निर्माण कार्य ठप्प हुँदा यो क्षेत्रमा गहिरो असर पर्न गएको हो । कच्चा पदार्थ आयात नहुनु, समयमा बिक्री वितरण नहुनु र बजारमा माग ह्वात्तै घट्नुले सिमेन्ट उद्योग थला पारेको हो ।
यसै सन्दर्भमा सिमेन्ट उत्पादन र वितरणको क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव, अहिलेको अवस्था, व्यावसायिक योजना र तयारीमा केन्द्रित भई हामीले बालाजी सिमेन्ट उद्योगका निर्देशक गौरव गडियासँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, सोहीे कुराकानीको सम्पादित अंश ।
– कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र सङ्कटग्रस्त भए भनिएको छ । सिमेन्ट उद्योगमा चाहिँ यसको प्रभाव कति पर्‍यो ?
हो, महामारी र लामो समयको लकडाउनले अरू उद्योग व्यवसाय जस्तै सिमेन्ट उद्योगमा पनि गहिरो असर परेको छ । ६ महिना लामो लकडाउनका कारण देशभरका सबै बजार र निर्माणका कार्य ठप्प भए । यो अवस्थामा सिमेन्टको बिक्री भण्डै शून्य भएको थियो ।
लकडाउन खुकुलो भएसँगै अब बिस्तारै बजार चहलपहल देखिएको छ । निर्माण कार्यले पनि अब गति लिने देखिएको छ । सबै क्षेत्र जस्तै हामी पनि विस्तारै पुरानै अवस्थामा फर्कनेमा आशावादी भएका छाँै ।
उत्पादन मितिबाट छोटो समयमा सिमेन्टको प्रयोग गरिसक्नुपर्ने भएकाले गोदामबाट जति सक्दो छिटो सिमेन्टको बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । बिक्री नभएका सिमेन्ट उद्योगले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था थियो । सोही कारण डिलर पनि अन्योलमा थिए । त्यसैले लकडाउन अवधिमा उत्पादनलाई बन्द नै गर्नुपरेको हो ।
–लकडाउनको समयमा सिमेन्ट उत्पादनको अवस्था कस्तो थियो ?
लकडाउन अवधिमा सिमेन्ट उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प जस्तै थियो । सिमेन्टको म्याद (आयु) छोटो हुन्छ । लामो समयसम्म भण्डारण गरेर राख्न सकिँदैन । यसैले होलसेल र खुद्रा दुवै व्यापारीले पनि अर्डर गर्ने र सिमेन्टलाई भण्डार गर्ने कुरै भएन ।
–अब लकडाउन पनि खुल्यो, बजार पनि खुल्न थालेका छन्, अहिले बजारमा सिमेन्टको माग कस्तो छ ? सिमेन्ट उत्पादन कसरी भइरहेको छ ?
लकडाउन खुकुलो भएसँगै बजारमा सिमेन्टको माग हुन थालेको छ । हामीले पनि सिमेन्टको उत्पादन थालेका छौँ । अवस्था सुध्रिँदै जाने, उद्योग व्यवसाय र बजार पुरानै लयमा फर्कनेमा हामी आशावादी छौँ ।
नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छ । हामीले विगतका केही वर्षहरुलाई विचार गर्यौं भने सिमेन्टको आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ । आगामी केही वर्षमा हामी नेपालको बजार मागलाई घरेलु सिमेन्टबाट नै पूरा गर्नेछौँ ।
कोभिड–१९ का असरले गर्दा अहिले बजार खुले पनि माग कम छ । त्यसैले बजारको मागअनुसार उत्पादन गरिरहेका छौँ । उत्पादन र आपूर्तिको दर कम छ । आशा छ, छिट्टै यो दर बढ्ने छ । सुरक्षाका कारण मुलुक लकडाउनमा गयो । सबै बजार बन्द थिए, बिक्री वितरण गर्न असम्भव थियो । यद्यपि पछिल्लो दुई हप्तादेखि बिक्रीले बिस्तारै गति लिन सुरु गरेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिएका छौँ ।
–तपाईंको सिमेन्ट चाहिँ अहिले कति उत्पादन भइरहेको छ ? आपूर्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
कम्पनीको प्रतिदिन ४० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता छ । हामी निरन्तर दैनिक उत्पादन दरलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ । विस्तारै यो दरलाई बढाउने छौँ । बाहुबली सिमेन्ट सम्पूर्ण नेपालभर पुर्‍याउन हामी लागेका छौँ । अब नेपालका कुनाकुनामा बालाजी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका समेन्ट पुग्छन् ।
–सिमेन्ट उत्पादन र बजार विकासका लागि कस्ता योजना अगाडि सार्नुभएको छ ? देश आत्मनिर्भर भइसकेपछि यसको निर्यात गर्नेबारे पनि यहाँहरुले योजना बनाउनुभएको छ कि ?
अहिले हामीले सिमेन्टको गुणस्तर र उत्पादनको पोर्टफोलियोमा वृद्धि गर्दै अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौँ । देशका हरेक भेगमा हाम्रो सिमेन्ट पुगोस् भन्ने चाहन्छौँ । त्यसैले बजार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । अब नेपालका हरेक भेगमा सिमेन्ट सहज र समयमै वितरणको सुविधा प्रदान गर्नेछौँ ।
हामीसँग विशेष योजना पनि छन् । तर कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउनका कारण बजार ठप्प हुँदा केही ढिला हुन पुग्यो । अब अवस्था सामान्य हुँदै जानेछ । हामी अझै यसमा गम्भीर भएर काम गर्दैछौँ । हामी एक पटक हाम्रा विशेष योजनाहरु तयार भएपछि मिडियामा सार्वजनिक गर्नेछौँ ।
अहिलेसम्म हामीसँग हाम्रा उत्पादनहरु निर्यात गर्ने कुनै योजना छैन । हामी पूर्ण रूपमा नेपालको बजारमा ध्यान दिन चाहन्छौँ र नेपाली ग्राहकलाई सहज र नियमित रूपमा गुणस्तरीय उत्पादन प्रदान गर्न चाहन्छौँ ।
हाम्रो सिमेन्टको गुणस्तरमा कहिल्यै थिएन र छैन । फुटकर बिक्रीमा केही समस्या भएको हुनसक्छ । त्यसमा हामी निकै सचेत भएका छौँ । हाम्रो उत्पादन बारेमा बजारमा उठेका प्रश्नलाई हामीले सुधारको अवसरको रूपमा ग्रहण गर्ने गरेका छौँ ।
–बालाजीको उत्पादन बाहुबली सिमेन्टको गुणस्तरमाथि बजारमा प्रश्न पनि उठेका थिए । गुणस्तर सुधारका लागि तपाईंहरुले कस्तो प्रगति गर्नुभयो ? अहिले बजारको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
म यो प्रश्नको प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, तपाईंकै मिडियामा त्यो न्युज आएको थियो । ती प्रश्न जुन भ्रमपूर्ण थिए । त्यस्तो समस्या हाम्रो सिमेन्टको गुणस्तरमा कहिल्यै थिएन र छैन । फुटकर बिक्रीमा केही समस्या भएको हुनसक्छ । त्यसमा हामी निकै सचेत भएका छौँ । हाम्रो उत्पादन बारेमा बजारमा उठेका प्रश्नलाई हामीले सुधारको अवसरको रूपमा ग्रहण गर्ने गरेका छौँ ।
म के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने जतिबेला हाम्रो उत्पादनको गुणस्तर बारे प्रश्न उठेको थियो, त्योबेला एकै महिनामा चार लाखभन्दा बढी सिमेन्ट बेचेका थियौँ । हाम्रो गुणस्तर कमसल थियो भने त्यति धेरै सिमेन्ट बिक्री हुने थिएन होला । बाहुबली सिमेन्टमा विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट सिमेन्ट कम्पनीहरुले प्रयोग गर्ने प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । दक्ष प्राविधिक इन्जिनियरहरुको प्रत्यक्ष निगरानी र उच्च स्तरीय मेसिनबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरिएको छ । ल्याब परीक्षण गरेर मात्र सिमेन्ट उत्पादन तथा बजारमा पठाउने गरिन्छ ।
हाम्रो गुण नियन्त्रणका उपायले कारखानाबाट बाहिर आउने सिमेन्टका प्रत्येक बोरा फ्रेस र क्वालिटी बेन्चमार्क पूरा गरेको मात्रै हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्दछौँ । हाल सबै बिक्रेता स्तरमा हाम्रो स्टकमा रहेका सिमेन्टहरुमा पहिले आएको सिमेन्टलाई पहिले पठाउने (फिफो) पद्धति अनुसार गर्न कम्पनीका प्रतिनिधिलाई अनुगमनमा खटाउने गरेका छौँ । यसले बाहुबली सिमेन्टबाट ग्राहकहरुले सधैँ ताजा र राम्रो गुणस्तरको सिमेन्ट पाउँछन् भन्ने सुनिश्चित गर्छ । यो हाम्रो ब्रान्डमा भरोसा राखेका हाम्रा मूल्यवान् ग्राहकहरुका लागि विशेष ग्राहक सेवा प्रदान गर्न हाम्रो पहलको एक हिस्सा हो ।
बजारले धेरै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । बाहुबली सिमेन्ट एकदम छोटो अवधिमा धेरै लोकप्रिय सिमेन्ट ब्रान्ड भएको छ । हामीले गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । हामी हाम्रा अमूल्य ग्राहकको विश्वासलाई कायम राख्न सधैँ प्रतिबद्ध छौँ ।
बाहुबली सिमेन्ट अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन हुन्छ । यसले हाम्रा उत्पादनहरुमा गुणस्तरको स्थिरतालाई सुनिश्चित गरेको छ । हामीले के सुनिश्चित गरेका छौँ भने बाहुबली सिमेन्टको प्रत्येक बोरा सधैँ ताजा हुन्छ र गुणनियन्त्रणका उपायहरुको पालना गर्दछ । साथै यसले हाम्रा मूल्यवान् ग्राहकको पैसाको मूल्य दिन्छ भन्ने हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ ।
–नेपालमा विभिन्न ब्रान्डका सिमेन्ट छन् । यो भीडमा ग्राहकले बाहुबली सिमेन्ट नै किन रोज्ने ?
मैले यसअघि पनि भनेँ, बाहुबली सिमेन्ट अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन हुन्छ । यसले हाम्रा उत्पादनहरुमा गुणस्तरको स्थिरतालाई सुनिश्चित गरेको छ । हामीले के सुनिश्चित गरेका छौँ भने बाहुबली सिमेन्टको प्रत्येक बोरा सधैँ ताजा हुन्छ र गुणनियन्त्रणका उपायहरुको पालना गर्दछ । साथै यसले हाम्रा मूल्यवान् ग्राहकको पैसाको मूल्य दिन्छ भन्ने हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ ।
–अन्त्यमा, महामारीले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्र माथि उकास्न एउटा उद्योगीको रूपमा यहाँको भूमिका कस्तो हुन सक्छ ? के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उद्योगधन्दाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । सिमेन्ट उद्योग विकास निर्माणको एक खम्बा हो । सिमेन्ट उद्योगले विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले हामीले गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । गुणस्तरको सिमेन्ट आपूर्ति गर्ने हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ ।
म सम्पूर्ण सिमेन्ट कम्पनीहरुलाई बजारमा उत्तम गुणस्तरको सिमेन्ट आपूर्ति गर्ने हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्न आग्रह गर्दछु ताकि यसले ग्राहकहरुद्वारा खर्च गरेको प्रत्येक रूपैयाँको मूल्य प्रदान गर्न सकोस् ।
म के पनि भन्न चाहन्छु भने अब हामी केही समयका लागि महामारीसँगसँगै चल्नुपर्नेछ । जबसम्म स्थायी समाधान आउँदैन तबसम्म सबै उद्योग, वितरक, ट्रेड च्यानल र बजारलाई सुरक्षित र स्वस्थ रहन आग्रह गर्दछु । आशा गरौँ, हामी छिट्टै नै यो महामारीबाट बाहिर निस्कनेछौँ र पुनः अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा डोहो¥याउन मद्दत गर्नेछौँ । साभार रातोपाटी
‘विदेशीलाई बलजफ्ति पिज्जा, बर्गर खुवाएका छौं’